OGM wuxuu shaqaaleysiin doonaa ugu yaraan 122 Qalinjabinta Dugsiga Sare | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaOGM waxay shaqaaleysiin doontaa ugu yaraan 122 ka qalin jabiyay dugsiga sare.
15 / 05 / 2020 Shaqooyinka, GUUD
ogm wuxuu sameyn doonaa ugu yaraan shaqaale dowladeed oo ka qalin jabiyay dugsiga sare
Xayeysiin ayaa waxaa daabacay Agaasimaha Guud ee Dhirta. Baaqa lagu daabacay cinwaanka "Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta, Agaasinka Guud ee Duurjoogta, 2020 ayaa la shaaciyey shaqaale qorista shaqaalaha" oo ay ka mid ahaayeen 122 shaqaale dawladeed oo laga qorey ugu yaraan ardayda ka qalin jabisay dugsiga sare.
Inuu buuxiyo shuruudaha guud ee lagu sheegay qodobka 657aad ee Sharciga lambar 48,
Iyadoo laga shaqeynayo heerka shaqaalaha heshiiska la galay sida ku xusan faqradda (B) ee Qodobka 657aad ee Sharciga lambar 4; Qandaraaslaha Qandaraaslaha wuxuu dhaqan galay farqada (B) ee Qodobka 1aad ee Sharciga No. 657 iyo Go'aanka Golaha Wasiirada ee taariiqda 4 iyo ku saabsan kuwii qandaraasyadoodii shaqo ay dhamaadeen ama codsadey meelaynta jagooyinka shaqaalaha qandaraaska ee Lifaaqa-6.6.1978. Waa in la tix galiyaa in qodobada ku xusan sadarka sedexaad iyo afaraad ee Lifaaqa 7aad ee Mabaadiida la xiriira Howlgalka la adeegsan doono. Kuwa xilalkaas loo magacaabayo lama magacaabi doono kuwa aan ku dhici doonin marka laga reebo qodobbada ku xusan cutubyada saddexaad iyo afaraad ee Lifaaqa Lifaaqa 15754aad ee Mabaadi'da Ku Saabsan Shaqada Shaqaalaha Qandaraasle.
Codsiyada kuwa aan lahayn aqoonsiyo cayiman oo aan dukumintiga dukumentiga ah lama aqbali doono. Intaas waxaa sii dheer, qandaraasyada kuwa loo fahmay inay hayaan dukumiintiyo been abuur ah / khalad ah oo ay soo saareen maalin kasta oo ay diyaarsadeen dukumiinti been abuur ah waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci ah oo ka dhan ah, xitaa haddii heshiiska la saxeexay oo la bilaabay inuu shaqeeyo, lacagtaasna waxaa lagu magdhabi doonaa danta sharciga ah.
SHURUUDAHA SHAQADA EE DIIWAANKA
Inaad heshay dhibcaha ugu yar 2018 ee KPSSP3 iyo KPSSP94 dhibcood, oo ay kujirto kooxda KPSS (B),
In aan ka weynaan doonin 36 sano jir taariikhda ugu dambeysa ee taariikhda arjiga,
Kuwa ka qalin-jabiyey wax ka mid ah machadyada tacliinta sare ee codsanaya booska ah Shaqaalaha Shaqaalaha (Darawalka);
Leh laysanka nooca-C,
Kuwa codsanaya jago qareen;
Inaad yeelato laysanka sharciga
122 Cisbitaalka oo ku yaalla Mugla